Shalay Jini Boqor Maantase Juriile iyo Galeyr – idalenews.com
Shalay Jini Boqor Maantase Juriile iyo Galeyr
Doorashadii sanadkii 2004-tii waxaa si weyn loo saadaalineyey in Col.Cabdullaahi Yusuf (AUN) ku soo bixi doono Madaxweynaha Soomaaliya, waxaase maalmo jaahwarer ku ridey siyaasi caan ah oo ay muddo soo wada shaqeeyeen.
Cabdi Cabdulle Siciid (Jini Boqor) oo ahaa siyaasi muddo garab taagnaa siyaasadda Col.Cabdullaahi Yusuf (AUN) tan iyo Jamhaddii SSDF ayaa qoonsadey qaabka Korneylku ula dhaqmey kadib markii uu ka raacey Gen.Cadde Muuse isla markaana qiil qiil la geliyey xubintii Xildhibaanada uu ka heli lahaa baarlamaanka.
Jini Boqor oo ka dabaakhaya qaabka loola dhaqmey ayaa isu sharaxey Afhayeenka Baarlamaanka, waxaana uu si cad ugu dhihi jirey Beelaha Hawiye oo qaati ka taagnaa Musharaxnimadda Cabdadullaahi Yusuf eray caan ah isaga oo leh “…Haddii aad aniga i doorataan Cabdullaahi Yusuf idin dey…..”.
Doorashadii waxa uu ku haray wareegii kowaad, waxaana wareegii labaad isugu soo harey laba nin oo Digil & Mirifle ah Shiikh Adan Madoobe oo ay wateen Kooxdii SRRC iyo Shariif Xassan Shiikh Adam oo ayw ateen Kooxdii Carta + G8 iyo Bulshada rayidka ah.
Maalintii shalay waxaa soo baxdey in Prof. Juurile oo ah siyaasi caan ah ruug cadaa aqoon iyo khibradba leh uu u sharaxn yahay Xilka Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya, Prof.Juurile waxa uu Baarlamaanka Soomaaliya ka soo galay Beesha Daarood gaar ahaan Beelaha Harti haddii si kale loo dhigana deegaanada Puntland oo siyaasadda Soomaaliya saameyn ku leh, Musharaxnimadda Prof.Juurile waxa ay abuurtey su’aalo badan oo la iska weydiiyey.
Dooda 1aad: Waxay salka ku haysaa ka hortag Prof.Galaydh
Waxaa jira warar sheegaya in Prof.Cali Khaliif Galaydh uu baarlamaanka gadaal ka galay kana mid yahay xubno labaatan oo ah oo magacyadooda gadaal laga gudbiyey.
Prof.Galaydh ayaa horey loo sheegay in uu u sharaxan yahay Guddoomiyaha Baarlamaanka ayna weliba dhab ka tahay, Galadyh waa “Anti Federalisim” waxaana uu si weyn uga soo horjeeda siyaasadda maamulada qaar dalka ka jira isaga oo aan la gabban ama qarsan.
Galaydh waxa uu heli karaa codadka Beelaha Hawiye qaar kamid ah Beelaha Dir laakiin. Waxa dood ka taagan tahay Beesha uu ka soo jeedo ee Daarood.
Beesha Mareexaan waxa ay dooneysaa kursiga Madaxweynaha waana Daarood, mana doonayaan in Musharaxnimada Farmaajo mugdi ay gasho, Beesha Majerteen waxay doonayaan Madaxweynaha, waana Daarood, mana doonayaan in fursadooda la dhumiyo codkoodana ma heli karo, sidoo kale Beesha Warsangeli waa adagtahay in uu codkooda helo, waxaa taas u dheer in aanu heli karin codadka beesha dhulbahante oo dhamaystiran, Sidoo kale Beesha Absame codkoodu maaha mid uu ku xisaabtamayo.
Hadaba si looga hortago in Prof.Galaydh in uu helo codad ku filan haddiiba uu Baarlamaanka galay isla markaana isa soo sharaxo ayaa Prof.Juurile isu sharaxay waxaana uu kala dhantaalayaa codadka Prof.Galaydh heli karo.
Dooda 2aad: Waa damac shakhsiyadeed
Sida aan sheegney Prof.Juurile waa aqoonyahan, ruug cadaa siyaasadeed weliba hal abuur ah, waxaana uu xaq u lee yahay in uu isu sharaxo xilkasta oo uu doono, taasi waa mid aan aaminsanahay, laakiin waa maxay waxa uu isugu sharixi waayey xilka Madaxweynaha, Waxaa dadka qaarkiis ku doodayaan waa mid uu wax ka soo falkiyey Shariif Xassan Shiikh Adam oo ay isu dhawaayeen muddooyinkii danbe, taas oo Shariif Xassan doonayo in uu ku badbaadiyo rajadiisa Maalinta Axadda kadib.
Dooda 3aad: Puntland aya wax ka og musharaxnimadda Juurile
Prof. Juurile waxa uu xildhibaan ahaa tan iyo sanadkii 2004 markaas oo Eng.Siciid Maxamed Raage kursigiisi u baneeyey Juurile, waa nin xiriir adag la le leh maamulka Puntland, waxaana uu safaro badan la galay Madaxweynaha hadda Dr.Faroole.
Madaxweynaha Puntland Dr.Faroole waxa uu saameyn weyn ku yeeshey siyaasadda Soomaaliya mudadii uu xilka hayey, waxaa dadka qaarkiis ku doodayaan in Dr.Faroole aysan dani ugu jirin Madaxweyne reer Puntland ah isla markaana ay aad u yaraneyso sameyntii iyo galaangalkii uu ku lahaa siyaasadda Soomaaliya, isla markaana la siin karin tixgelintii weyneyd ee uu ka heley Beesha Caalamka, halka dood kale ay tahay in Madaxweyne reer Puntland ah oo Soomaali oo dhan Madaxweyne u noqda uu isaguba u soo dhicin karo qoonadada Dr.Faroole u raadiyo oo ayba tahay “Durbaan Gacalkaa Hakuu Hayo Ama Garabka Hakuugu Jiro”.
Haddiiba ay dhacdo in in Budhka ama Garuunka Baarlamaanka uu qabto nin Daarood ah, ayna dhab u noqoto riyada Shariif Xassan ee ah in uu ka gudbo maalinta Axadda ah ee soo socota ayaa la isweydiin karaa maxaa dhici karaa haddii Shariif Xassan looga guuleysto doorashada Madaxweynaha uuna ku soo baxo Siyaasi u dhashey beelaha Hawiye, Miyaan gabbalku u dhicin Shariif Xassan?.
Marka hore ma noqon karo Raysalwasaare oo shahaahada uu haystaa waa dugsiga hoose sida isagu sheegey haddaanu mid suuqa ka soo gadan sida isagu sheegey in la dagan karo, raysalwsaaruhu waa in uu lee yahay aqoon jaamaceed iyo weliba khibrad sida dastuurku qabo.
Marka labaade Madaxweynaha la dooran dooro ayey ku xiran tahay qofka uu ka dhigaayo Raysalwsaare mana jiro qodob dastuuri ah oo dhigaya beesha uu ka imaanayo Raysalwsaaruhu, Waxaana uu ka dhigi karaa haddii uu doono Isla beesha Hawiye , waana midda kuwa wax qora ee u dhashey Beelaha Hawiye ay weli ugu dhaliilaan siyaasaddii Adan Cadde (AUN) uu Raysalwsaare ugu magacaabey Dr.Cabdirashiid Cali Sharmarke (AUN) waxaana ay ku doodaan waxay ahayd in uu magacaabo Cabdullaahi Ciise, Maantaba ha sameeyeen haddiiba ay u gasho.
Si kastaba ha ahaatee Maalmaha soo socda waa kuwo xiiso iyo xamaasad leh, Waxaana la isweydiinayaa Juurile ma noqon doonaa Jini Boqorkii Shalay?, mise cid kale ayuu Janbal u dhigayaa?, mise waa Musharax dhab ah?, Sidoo kale waxaa las siweydiinayaa Shariif Xassan Shiikh Adam Digil & Mirifle ma u horseedi doonaa in ay hantaan jagada Madaxweynaha? mise laba gebi dhexdood ayuu dhigi?, Nasiibku waa belaayee armaa Madaxweynihii u horeeyey ee Qaad wale ahaan jirey Iskoolna ka saaqidey uu Soomaaliya Madaxweyne u noqdaa, sida dalka Peru uu madaxweyne ugu noqdey kaba caseeye ama baalashle hore Mr Toledo sanadkii 2001
Xigasho: Horsed Media
Maxamed Rashiid oo si rasmi ah ugu dhawaaqey inuu yahay Musharaxa Af-hayeenka Barlamaanka
Odoyaashii Dhaqanka Ee Soo Xulayey Baarlamaanka Oo Loo Sheegay In Shaqadoodi Dhamaatey